Archive du 20190228
Polytech Vontovorona Ady saritaka tanteraka
Tao anatin’ny 3 andro nisesy nanomboka ny alatsinainy lasa teo no nisian’ny fitokonana teny amin’ny sekoly ambony Politeknika eny Votovorona. Antony ny faharatsian’ny trano fonenan’izy ireo tsy misy fanamboarana sy fanavaozana kanefa nakarina ho 18.000Ar raha toa ka 7.000Ar.
Ady amin`ny tsimatimanota Ampy izay ny fialokalofana amin`ny fanaovana politika
Mila miala amin`ny kolontsain`ny tsimatimanota isika eto Madagasikara raha tiana handroso. Amin`ny ankapobeany, tafapetraka ao anatin`ny fomba amam-panao izay mahazo fahefana izany.
Raharaha Andramena Maro amin’ny mpanohana an-dRajoelina no voakasika
Araka ny fanadihadiana natao sy ny vaovao samihafa hatramin’ny tetezamita dia maro amin’ireo mpanohana ny filoha Andry Rajoelina no voakasika amin’ny resaka raharaha andramena na boaderozy.
Fitantanana raharaham-panjakana Takona ireo teknisianina Malagasy
Ao anatin’ny fandaminana ny fitondram-panjakana ankehitriny ary manomboka efa mipetraka avokoa ny ekipa hanatanteraka ny programan’ny filoham-pirenena.
Raharaham-pifidianana Solombavambahoaka Hisandrahaka manerana ny nosy ny Vondrona politika VTT
Noho ny hiatrehana ny fifidianana Solombavambahoakan’i Madagasikara ho tontosaina ny faha-27 mey 2019 dia fantatra fa tafatsangana ankehitriny ny Vondrona politika VTT « Vondron’ny Tia Tanindrazana »
Mifoha ny fitakiana sendikaly maro Mananontanona sahady ny fidinana an-dalambe
Manomboka ny fitokonana sy ny fitakiana samihafa amin’izao. Io efa niaraha-nahita io ny grevin’ny mpianatry ny sekoly Politeknika eny Vontovorona.
Fanompana mpitondra teo aloha Malalaka ho an’ny mpanohana fanjakana ?
Ilay fanjakana indray no toa mitady mpanenjika sy mandranitra ady eto. Tsy hiverenana ny resaka fisamborana sy fanagadrana izay hivoizana ny fampanjakana ny tany tan-dalàna.
Ady amin’ny kolikoly Mila mahazo toerana 42 Rajoelina
Tsy ekeko ny gaboraraka, ny fandanilaniam-poana ny volam-panjakana. Tsy azo leferina ny fanaovana tolotr’asa tsy misy asa notanterahina akory.
Loza, faty olona, grevy,… Anaty krizy i Madagasikara
Mitohy tsy an-kiato ny loza samihafa eto amintsika. Rehefa tsy matin’ny valan’aretina, dia matin’ny loza voajanahary.
Rakotomalala Tsiory DTN Atletisma Nanazava ny raharaha Rasoarimalala Paquerette
Nitondra fanazavana mikasika ny raharaha Rasoarimalala Paquerette « Pà » mpihazakazaka avy any Miarinarivo ary tompondaka 2019 ny ligin’ny atletisma any Itasy nahabe resaka an-gazety,
Edito Hanomboka hifampitady
“Avereno aminay ny asanay”, hoy ry zareo polisy. “Avereno aminay koa ny taninay”, hoy ry zareo havana avy any Atsimo.
FITAMBARAN’NY ANTEMORO ETO ANTANANARIVO Tsy tokony halana amin’i Fitovinagny ny tanànan’i Namorogna
Ny tanànan’i Namorogna no nahafitovinagny azy raha ara-tanàna, hoy ny fitambaran’ny Antemoro eto Antananarivo na ny FIANTA.
Tsy fandriampahalemana Lasa matahotra mpitandro filaminana ny vahoaka
Tsy vitsy amin’ny vahoaka Malagasy no lasa matahotra mpitandro filaminana. Matetika izy ireo izay natao “hitandro ny vahoaka indray no mamono ny aina”,
DEPIOTE NAMPANANTSOIN’NY POLISY
Depiote iray no nampanantsoin’ny polisy ary nanokafana fanadihadiana teto an-drenivohitra.
Kaontenera tsy ampy etsy La Réunion kely Miandry fatratra ny andiany manaraka ny mponina
Tokantrano 18 isa hatreto no efa nahazo toerana anatin’ireo kaontenera miisa dimy fanomezana avy amin’ny minisiteran’ny mponina sy fampiroboroboana ny vehivavy ho an’ireo olona tsy manan-kialofana etsy La Réunion kely.
Traboinan’Anosibe sy Ampamarinana Nifandrimbonana ny fanampiana
Nanome tanana ho an’ireo olona traboina noho ny hain-trano tetsy Anosibe Andrefana tamin’ny 19 febroary lasa teo ireo orinasa tsy miankina mivondrona ao amin’ny PHSP mitsinjo ny mahaolona tahaka ny Groupe Axian amin’ny alalan’ny fondation Telma.
Tompona karaoke sy bar sasantsasany Miantso ny namany rehetra mba hanara-dalàna
Miantso ny fampanarahan-dalàna ho an’ireo rehetra manao asa fitadiavam-bola mitovy aminy ireo tompona karaoke sy bar sasantsasany eto an-drenivohitra.
TSENAN’IVATO Ny 85 %-n’ny asa fanamboarana no efa vita
Ny 85 %-n’ny asa fanamboarana ny tsenan’Ivato amin’izao no efa vita, tsena iray anisan’ny lehibe indrindra eto Analamanga.
Sendikan’ny JIRAMA Mitaky ny hialan’ny Tale jeneraly
Manome 48 ora ny Tale jeneralin’ny JIRAMA ny mpiasa mba hiala raha tsy izay dia hiroso amin’ny fitokonana faobe.
SARIBAO Nihoapampana ny vidiny noho ny vaovao diso
Vaovao nifandiso no nampiakatra ny vidina arina fandrehitra teto an-drenivohitra. Nogiazan’ny avy any am-potony mihitsy ny saribao fa natahotra ireo tompon’andraikitra isan’ambaratongany, noho ny vaovao nalaza tamin’ny herinandro ambony fa tsy azo tapahana intsony ny ala.
Kaominina Ambatomirahavavy Kara-tany an’arivony maro no nozaraina amin`ny tompony
Natomboka ny alatsinainy 25 febroary lasa teo, ny fizarana kara-tany faobe andiany faharoa ao amin`ny kaominina Ambatomirahavavy niarahana tamin`ny sampana fananan-tany, mba ahafahan`ireo tompon-tany hisoratra ara-dalàna.
Fampianarana sy fanabeazana eto Madagasikara Lasa resaky ny moana sy marenina
Tsy ampy hiatrehan’ny tanora malagasy ny tontolon’ny asa ny lalam-piofanana nodiaviny sy ny mari-pahaizana ananany.